အထည်အလိပ်ကျောပိုးအိတ် | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan OEM ODM-fabricbackpacks.com
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် -> ထုတ်ကုန်များ -> အဆောက်အဦးအပြင်ထည် -> အထည်အလိပ်ကျောပိုးအိတ်
ကျနော်တို့ဟာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan အထည်အလိပ်ကျောပိုးအိတ် ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းခြင်းနှင့်တင်ပို့။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချခြင်းဝန်ဆောင်မှု, ကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့ရောင်းချသူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုရာ၌ခန့်ထားပြီ။ ကျနော်တို့အရည်အသွေးကိုထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်များနှင့်သင်တို့အဘို့အ On-အချိန်ပေးအပ်ခြင်းကတိပေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထူထောင်ဖို့ပါပြီ။ သင်သည်ငါတို့ထုတ်ကုန်တွေကိုမဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
210D ထံမှ 1680D မှ 1. ခြိုငျ့ & Ripstop နိုင်လွန်အထည်အလိပ်
2. Cordura အထည်အလိပ် 500D, 1050D
3. NY66 & NY6 အတွက် Ballistic အထည်အလိပ် 420D ~ 1050D
4. Poly အထည်အလိပ် 300D 300 / 600D, 600D, 1200D
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော-ထည်အားလုံး 5. ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှာအနည်းဆုံး 10,000mmH2O မှ function ကို & ရေစိုခံတက် coated နိုင်ပါသည်။
6. အရောငျ: ကျနော်တို့အရောင်စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုပေး
YungYaw Fabrictech ကော်ပိုရေးရှင်းထိုင်ဝမ်အားဖြင့်ထုတ်ဝေသည် 7.